Waa maxay hydrometeor iyo maxay yihiin noocyada ugu waaweyn? | Saadaasha Shabakadda
Waa maxay hydrometeor iyo maxay yihiin noocyada ugu waaweyn?
Weligaa ma is weydiisay waxa uu yahay aaladda koronto-dhaliyaha? Halkan waxaad kuheleysaa jawaabta: ifafaalahan waa aruurinta biyo, dareere ama walxo adag oo ku dhaca hawada. Qaybahaani way sii jiri karaan, waa la dhigi karaa walxaha ku jira jawiga xorta ah, ama waxay ka dhici karaan jawiga illaa ay ka gaarayaan dusha sare ee dhulka.
Kuwa ugu waaweyn waxaan ka dheehneynaa roob, ceeryaamo, ceeryaamo ama dhaxan. Aynu ogaanno noocyada ugu waaweyn ee jira iyo sida lagu yaqaan.
Hydrometeors-ka ayaa lagu hakiyay jawiga
Waa kuwa ka kooban qaybo aad u yar oo biyo ah ama baraf ah oo ku xira jawiga.
Ceeryaamo: waxay ka kooban yihiin dhibco biyo aad u yar yar oo isha lagu arki karo. Dhibcahaani waxay yareeyaan muuqaalka jiifka ah ee ka hooseeya 1km. Cirku wuu daciifi karaa marka laga fiiriyo masaafada u dhexeysa 500 iyo 1000m, dhexdhexaad ah marka masaafada u dhexeysa 50 iyo 500m, iyo cufnaan marka muuqaalka uu ka yar yahay 50m.
Ceeryaamo: Sida ceeryaanta oo kale, waxay ka kooban tahay dhibco biyo ah oo aad u yar, laakiin xaaladdan oo kale waa wax yar-yar. Waxay yareysaa muuqaalka u dhexeeya 1 iyo 10km oo leh qoyaan isku dhow 80%.
Hydrometeors-ka oo lagu shubo walxaha ku jira cimilada
Waxay dhacaan markay uumiga biyaha ee cimilada ku soo ururaan walxaha dhulka yaal.
Dhaxan: Waxay dhacdaa markii kristantarrada barafka lagu shubo walxaha, heer kulkuna aad ugu dhow yahay 0 digrii.
Dhaxan: Marka qoyaanka ciiddu barafoobaan, lakab aad u sibiibix ah oo baraf ah ayaa samaysma, kaas oo ah markaan dhahno dhaxan baa jirtay.
Sariirta qabow: Waxay ku dhacdaa meelaha ceeryaantu jirto oo dabayshu xoogaa dhacdo. Dhibcaha biyuhu way barafoobaan markay taabtaan dhulka.
Hydrometeors ka dhacaya hawada
Waa waxa aan ku naqaan magaca roobab. Waa dareere ama jajab adag oo ka soo dhaca daruuraha.
Roob: Waa qaybo dareere ah oo biyo ah dhexroor ka weyn 0,5 milimitir.
Nevada: Waxay ka kooban tahay kiristaalo baraf ah oo ka soo dhaca daruuraha roobka.
Hambalyo: Roobabku waxay ka kooban yihiin qaybo baraf ah oo dhexroorkoodu u dhexeeyo 5 iyo 50 milimitir.
Miyay dani kuugu jirtay?
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Waa maxay hydrometeor iyo maxay yihiin noocyada ugu waaweyn?
Xilliga duufaanka Atlantic waxay yeelan doontaa dhaqdhaqaaq celcelis ah
Muhiimadda daruuraha ee isbeddelka cimilada